Ny Red Hat Enterprise Linux 9 dia tonga miaraka amin'ny Linux 5.14, Gnome 40, fanatsarana ary maro hafa | Avy amin'ny Linux
Ny Red Hat Enterprise Linux 9 dia tonga miaraka amin'ny Linux 5.14, Gnome 40, fanatsarana ary maro hafa
Darkcrizt | 10/05/2022 23:31 | Nohavaozina amin'ny 12/05/2022 22:55 | Fitsinjarana
Red Hat dia nampiditra tamin'ny fomba ofisialy ny version 9 amin'ny fizarana Linux "Red Hat Enterprise Linux" (RHEL), antsoina hoe Plow.
Ity kinova ity mikendry ny hampihatra endri-javatra sy fampiasa tsy misy hafa loatra amin'ny dikan-teny teo aloha. Ny Red Hat Enterprise Linux 9 dia natao hitondra fiovana ara-barotra miaraka amin'ny fiovan'ny herin'ny tsena sy ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny tontolon'ny computing mandeha ho azy. Ny sehatra dia ho hita amin'ny ankapobeny amin'ny herinandro ho avy.
Version 9 no famoahana lehibe voalohany hatramin'ny nikatonan'ny IBM ny Red Hat tamin'ny Jolay 2019. Navoaka roa volana talohan'izay ny RHEL 8.0. Io ihany koa no famoahana lehibe voalohany amin'ny fizarana orinasa hatramin'ny namerenan'ny Red Hat ny fizarana orinasa CentOS maimaim-poana ho RHEL ambony fa tsy fanamboarana azy io.
Inona no Vaovao ao amin'ny Red Hat Enterprise Linux 9
Red Hat Enterprise Linux 9.0 tonga miaraka amin'ny kernel 5.14, systemd 249, Python 3.9, PHP 8, ary GCC 11.2. Ahitana a web console mifototra amin'ny tetikasa Cockpit, izay manohana ny fametahana mivantana ny kernel mandeha amin'ny alàlan'ny fitaovana kpatch. Misy ihany koa ny fitaovana ho an'ny fitantanana kaontenera, mifototra amin'ny tetikasa upstream toolbx.
Flatpak dia mbola endrika mifantoka indrindra eo amin'ny desktop, tsy tahaka ny endrika Snap an'ny Ubuntu izay, araka ny hevitray, dia natao ho an'ny birao sy ny mpizara. Satria ny ankamaroan'ny fandefasana RHEL 9 dia mety amin'ny mpizara, ny container dia ho zava-dehibe kokoa amin'ny fametrahana fampiharana. Ny dikan-teny vaovao mitondra fiovana lehibe amin'ny fitantanana kaonteneras, ao anatin'izany ny kinova 2 an'ny cgroups sy ny fampiasana crun ho toy ny fotoana fandefasana entana.
Ankoatr'izay, Marihina koa fa nanatsara ny fahombiazan'ny SELinux ary mihena ny fanjifana fahatsiarovana. Ny fanohanana nesorina amin'ny fametrahana "SELINUX = kilemaina" hanesorana ny SELinux ao amin'ny /etc/selinux/config (fametrahana voatondro ankehitriny dia manakana ny fampandehanana ny politika, ary raha ny marina, ny fanalana ny fiasan'ny SELinux dia mitaky ny fandefasana "selinux=0" amin'ny kernel).
Nasongadina ihany koa izany fanohanana fanampiny ho an'ny fampifanarahana ny fotoana marina mifototra amin'ny protocol NTS (Network Time Security), izay mampiasa singa amin'ny fotodrafitrasa fototra ho an'ny daholobe (PKI) ary mamela ny fampiasana TLS sy AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) ho fiarovana amin'ny kriptografika ny fifandraisan'ny mpanjifa-server amin'ny protocol NTP ( Time Network. Protocol). Ny mpizara chrony NTP dia nohavaozina ho version 4.1.
Red Hat Enterprise Linux 9 koa manasongadina ny ezak'i Red Hat amin'ny famoahana ireo endri-javatra fototra rafitra rafitra toy ny serivisy, manomboka amin'ny serivisy sary vaovao. Miorina amin'ny fiasa efa misy amin'ny sehatra fototra, ity serivisy ity dia manohana ny sary ho an'ny rafi-drakitra manokana sy ny mpamatsy rahona sy ny teknolojia virtoaly, anisan'izany ny AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, ary VMware.
Red Hat sy AWS dia niara-niasa nandritra ny folo taona mahery mba hampandehanana ny enta-mavesatry ny Red Hat Enterprise Linux amin'ny tranga AWS amin'ny fampiasana ireo processeur Graviton noforonin'ny ARM. Ny fampidirana ny Red Hat Enterprise Linux 9 miaraka amin'ireo processeurs AWS Graviton dia manampy amin'ny fanatsarana ny vidin'ny vidin'ny enta-mavesatra isan-karazany mandeha amin'ny Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
Red Hat Enterprise Linux 9 dia manohy ny fanoloran-tenan'ny Red Hat amin'ny fanomezana a Sehatra Linux hardened mahazaka ny enta-mavesatra saro-pady indrindra, manambatra ny fanavaozana miaraka amin'ny fahaiza-manao fiarovana midadasika. Ny famandrihana Red Hat Enterprise Linux dia misy ihany koa ny fidirana amin'ny Red Hat Insights, ny serivisy famandrihana mavitrika ataon'ny Red Hat mba hamantarana sy hanitsiana ny mety ho fahalemena sy ny olan'ny fikirakirana rehefa manatsara ny fampiasana loharano sy famandrihana rahona hybrid.
Red Hat Enterprise Linux 9 manasongadina ihany koa ny maritrano fandrefesana ny fahamendrehana sonia nomerika sy hash (IMA). Miaraka amin'ny maritrano fandrefesana ny fahamendrehana, ny mpampiasa dia afaka manamarina ny fahamendrehan'ny rafitra miasa amin'ny fampiasana sonia nomerika sy hashes. Izany dia manampy amin'ny fahitana ireo fiovana ratsy amin'ny fotodrafitrasa, manamora ny famerana ny mety hisian'ny rafitra simba. Manohana bebe kokoa ny safidin'ny orinasa momba ny maritrano sy ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny rahona hybrid misokatra, ny Red Hat Enterprise Linux 9 dia ho hita ao amin'ny IBM Cloud ary mameno ihany koa ireo endri-piarovana lehibe sy fahaiza-manaon'ny IBM Power Systems sy IBM Z.
Ankoatr'izay, manohana ihany koa ny fametahana kernel mivantana avy amin'ny console web Red Hat Enterprise Linux, automatique bebe kokoa ny fomba ahafahan'ny fikambanana IT manao asa manan-danja amin'ny ambaratonga. Ny ekipan'ny asa IT dia afaka mampihatra ny fanavaozana amin'ny fametrahana rafitra miparitaka be nefa tsy mila miditra amin'ny fitaovan'ny baiko, manamora ny famahana olana misy fiantraikany amin'ny famokarana avy amin'ny foibe data afovoany mankany amin'ny rahona maro, anisan'izany ny perimeter.
Farany, raha te hahalala bebe kokoa momba izany ianao dia afaka mijery ireo antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ny Red Hat Enterprise Linux 9 dia tonga miaraka amin'ny Linux 5.14, Gnome 40, fanatsarana ary maro hafa
Efa navoaka ny Fedora 36 ary misy fiovana be dia be, jereo izy ireo!